37 taona aty aoriana:HIVERINA NY FANAMBOARANA BALA -
AccueilRaharaham-pirenena37 taona aty aoriana:HIVERINA NY FANAMBOARANA BALA
Hisokatra indray ny orinasa miaramila ao Moramanga, izay efa nikatona nandritra ny 37 taona. Hamokatra bala ho an’ny firenena Malagasy izy io. Tsy ankifidy fa ny bala izy ampiasain’ny mpitandro ny filaminana dia hamboarina ao avokoa. Midika izany fa efa miarina ny fanarenana ny firenena, satria ireo mpitondra teo aloha, tsy nahavita nanao topimaso kely an’itony foto-drafitrasa tena ilain’ny firenena itony. Nijanona teo amin’ny fanangonan-karena sy fanatsarana ny orinasany manokana ireo Filoha nisesy. Hany ka na bala faran’izay tsotra tokony ho vitantsika eto aza nafarana avokoa.
Tsy ny miaramila ihany no hahazo tombony amin’izao fisokafan’ity orinasa miaramila ity fa ny sivily ihany koa. Maherin’ny 60 ireo olon-tsotra hahazo tombony amin’izany. Tonga tany an-toerana mihitsy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimamp ho an’ny olona fotsiny teo aloha. Teo koa ny fitokanana Csb II , izay afaka mandray marary 50 isan-kerinandro. Ary farany ny toby mpamokatra herinaratry ny Jirama, izay hamatsy an’ilay orinasan’ny miaramila sy ny tanàna manodidina.
Mitohy ny fanamboarana foto-drafitrasa maharitra ho an’ny vahoaka. Tetezana, hopitaly, herinaratra, toko telo mahasahana andro ilain’ny vahoaka ireto notokan’ny filoha sy ny tompon’andraikitry ny tafika ireto, ho fampandrosoana ny eny ifotony. Ny mampiavakay omaly ity koa ireo foto-drafitrasa tany an-toerana omaly. Tetezana iray efa simba tao anatin’ny taona maro tao Ambohibary Moramanga no vita soa aman-tsara. Nahazaka fiara mihitsy ilay izy amin’izao raha toa ka natokana ho an’ny olona fotsiny teo aloha. Teo koa ny fitokanana Csb II , izay afaka mandray marary 50 isan-kerinandro. Ary farany ny toby mpamokatra herinaratry ny Jirama, izay hamatsy an’ilay orinasan’ny miaramila sy ny tanàna manodidina.
Mitohy ny fanamboarana foto-drafitrasa maharitra ho an’ny vahoaka. Tetezana, hopitaly, herinaratra, toko telo mahasahana andro ilain’ny vahoaka ireto notokan’ny filoha sy ny tompon’andraikitry ny tafika ireto, ho fampandrosoana ny eny ifotony. Ny mampiavaka ny filoha Hery Rajaonarimampianina dia tsy mba be tabataba fa rehefa mitokana an’ilay foto-drafitrasa izy vao gaga ny maro. Ny hafa mantsy efa niaraha-nahita teto fa raha mitokana foto-drafitrasa kely iray dia tsy maintsy handaniany rora mihitsy ny fivoizany izany.